Hlola iPerth, e-Australia - World Tourism Portal
Hlola iPerth, e-Australia
Yini ukubona. Izindawo zokudlela ezihamba phambili ezihamba phambili ePerth, e-Australia.
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha yePerth
Bukela ividiyo ekhuluma ngoPerth
Hlola iPerth inhlokodolobha yaseNtshonalanga Australia futhi inhloko-dolobha engabodwa kakhulu yabantu abangaphezu kwenkulungwane emhlabeni.
IPerth inabantu abacishe babe yizigidi ezingama-1.6, okwenza kube idolobha lesine ngobukhulu e-Australia. Amabhishi amaningi angenabantu lapho kugudla ugu lwePerth achaza indlela yokuphila: IPerth ibekwe emuva, ithule futhi iphephile.
Isifunda sasePerth besiyikhaya labantu bomdabu baseNyoongar okungenani iminyaka edlule ye-40,000.
Naphezu kokuhlukaniswa kwayo kanye nenani elincane labantu, iPerth idolobha elihluke ngokumangalisayo ngokwamasiko. Ngenxa yezinga eliphakeme lokufudukela ePerth, ngaphansi kwengxenye yabahlali basePerth bazalelwa ngaphandle kwase-Australia. Ukusondela kwaso eSoutheast Asia nase-Afrika kuholele ekufudukeni kwabafuduki abavela emazweni anjenge Malaysia, INingizimu Afrika kanye Thailand, futhi lokhu kubonakala ekuhlukeni kokudla okutholakalayo ePerth. Uma ufisa ukuzwa isiko le-cosmopolitan ngaphandle kokuphithizela nokuxinana kwamadolobha amakhulu khona-ke iPerth ikufanele ukuvakashelwa
Idolobha linesimo sezulu esishisayo saseMedithera. Ehlobo kuyashisa futhi komile ngenkathi ebusika imanzi kakhulu futhi imnene.
Intwasahlobo (Sep-Nov) kanye nekwindla (Mar-May) yizikhathi ezinhle zokuvakashela ePerth. Intwasahlobo (ikakhulukazi izikhathi zika-Okthoba / Novemba) mhlawumbe iyona engcono kakhulu yokubona izinto ngemuva kwemvula ebusika ebusika, izimbali eziqhakazile zasendle ezungeze iKings Park ne-Avon Valley ziyaqhakaza kahle. Izindawo ezisedolobheni elikhulu kanye nezindawo ezinamahlathi zinezinhlobo eziningi zezimbali ezivame ukuqhakaza i-en-masse, ngakho-ke kuwukuhlakanipha ukuthenga ngaphezulu kwe-the-counter hay fever noma ama-antihistamines kumakhemisi wendawo ngaphambi kokuthatha uhambo lokuwabona ngamehlo amancane. Ama-beach-goers avela kubanda obandayo angathola ukuthi izinyanga zasehlobo zilukhuni kakhulu, zivame ukufinyelela ku-35 ° C futhi kwesinye isikhathi kuze kufike ku-45 ° C phakathi kwemini, ngakho-ke kungcono kakhulu ukuvakasha phakathi ngoMashi-Ephreli noma u-Okthoba-Novemba kanye nokuthatha. isigqoko, ilokhi yokukhanya kwelanga nezibuko.
Zonke izindiza ezihleliwe zamanye amazwe nezasekhaya ziyafika futhi zisuka ePerth Airport.
Indawo yedolobha elikhulu iPerth inohlelo oluthembekile nolungabizi kakhulu lokuhamba komphakathi olusetshenziswa yiTransperth.
UPerth noFremantle bangahlolwa kahle ngezinyawo noma ngamabhayisekili njengoba iPerth inesinye ingqalasizinda ehamba phambili nokuhamba ngezinyawo e-Australia. Inethiwekhi yamabhayisekili kaPerth ifana nohlelo olukhula njalo, oludumile lwamabhayidi / ngezinyawo zabahamba ngezinyawo.
Into eyathandwa kakhulu phakathi kwabahamba ngamabhayisekili bendawo abajwayele ukuhamba ngasendaweni eNyakatho yoMfula iSwan phakathi koMuzi neNedlands. Vumela amaminithi we-60 ohambweni oluyindilinga ngale ndlela, njengoba ungahlangabezana nesiphepho esinamandla.
Ukuqasha imoto kuyindlela ekahle yokuhamba yokuhambela izindawo ezihehayo. Imigwaqo emikhulu kaPerth nemigwaqo emikhulu ayikhululekile kunoma iyiphi imali ekhokhwayo, njengoba kungenjalo Sydney futhi Melbourne nakuyiphi yalemigwaqo emikhulu yempi; kungenzeka ukuthi uzungezwe indawo enhle yasemaphandleni kungakapheli imizuzu.
Abahlinzeki bokuqashwa kwezimoto ezifana ne-Classic Car Hire Perth, i-Europcar, i-Redspot, i-Avis, iHertz zitholakala esikhumulweni sezindiza futhi kukhona okumbalwa okuhlakazekile ezungeze idolobha namaphethelo.
Kunokuningi ongakubona enkabeni yedolobha ngaphakathi kwebanga elizulazulayo. Ifihliwe phakathi kwesihlahlana sendawo ezungezile neyedolobha elikhulu okuheha okumbalwa okubonakalayo okuvamisile kungaphansi kwehora ukuhamba ngemoto, noma isikhathi esithe xaxa ezokuthutha umphakathi.
Ngaphandle kwendawo yedolobha kukhona ezinye iipaki zezwe ezingashintshiwe, ugu olungagadliwe nezinye izindawo ezihehayo.
Kunendawo ebekiwe ku-zoo yama-kangaroo lapho angazulazula khona ezindleleni zabavakashi kanti nezilwane zisetshenziselwa abantu ukuze ubabone besondele kakhulu.
Ukubona ama-kangaroo asendle zasendle avakashela iPinaroo Valley Memorial Park; ibanga lokuhamba ukusuka kuWhitfords Transperth Sitima / Isiteshi Semetro. Njengoba kunesikhala esiningi sabo ngeke ubabone bengadli nje kuphela kepha futhi bayaduma.
Amakilabhu amaningi wegalofu wasendaweni, iKarrinkup Golf Club, iJoondalup Golf Club azoba namachashaza eKhangaroos emigwaqweni engenacala, futhi kungenzeka ukuthi uwabone ngesikhathi somdlalo wegalofu.
Ikhilikithi - Ikhaya lasekhaya yi-WACA. I-WACA ibuye ihlanganyele omunye wemidlalo yokuHlolwa kwehlobo ehambelana nayo England ngoJanuwari.
IPerth inama bhishi amahle kakhulu kuleli, afanele ukubhukuda phakathi nezinyanga ezifudumele.
Ukubhukuda Naked. Kukhona ibhishi elilodwa kuphela ePerth elivumela ukugeza okunqunu: Swanbourne. Azikho izinto zokugcina impilo noma amafulegi abomvu naphuzi kuleli bhishi ngakho-ke kubalulekile ukubeka iso ezinganeni eduze kwamanzi. Ugu olunqunu luvame ukwehlukahluka kubantu abafuna ilanga bayo yonke iminyaka; imibhangqwana, imindeni, amaqembu. Indlela elula yokufika khona ngemoto
IPerth inezindlela ezinhle kakhulu zokuhamba ngebhayisekili kanye nesimo sezulu esimnandi cishe unyaka wonke okwenza kube kuhle ukuhamba ngebhayisikile. Izindlela ezilandela uMfula iSwan zihle kakhulu futhi zimcaba kakhulu. Ungathatha ibhayisekili lakho noma uqashe ibhayisekili
IPerth inamapaki amaningi amnandi, aqala ngamapaki angaphakathi nedolobha afana neKings Park, iBold Park, neLake Monger, ukuya emapaki amadolobha angaphandle anjengeJohn Forrest neWhiteman Park
Kwesinye samabhinema amaningi azimele noma aseYurophu. Lezi zindawo zokubukela amabhayisikobho zikhombisa uhla lwemikhiqizo yasendaweni, ye-Bollywood, yesiFulentshi neyase-Italy kanye nemikhosi yamafilimu yamazwe omhlaba kanye nemibhalo yonke unyaka. Bheka futhi nezamabhanyabhanya omoya ovulekile ehlobo, atholakala eKings Park, ama-movie kaBurswood, uLuna Leederville, kanye neMundaring.
Chitha usuku eFremantle; ulungele ukuhamba uzungeze ngaphandle kwenhloso ethile engqondweni noma ukuthenga okulula noma kungani ungakujabuleli ukudla noma ikhofi nekhekhe ngenkathi kushubisa umkhathi? Ungaphuthelwa Izimakethe zeFremantle. Ijele laseFremantle, iMarimeime Museum, iRound House kanye neStop of AC / DC's Bon Scott yizinto ezithandwayo.
Vakashela indawo ebekiwe ngasogwini lweFremantle, eRottnest Island. Kunezinhlobonhlobo zezilwane zasendle ongazibona (kufaka phakathi iQuecha) eyaziwayo kanye namathuba okubona imikhomo, amahlengethwa kanye nezimpawu zoboya ogwini, kepha lokhu kuzohlala kuncike kwisizini. Enye inketho ukuvakashela iPenguin Island, ikhaya le- “Little Penguins” noma i- “Fairy Penguins”, elise5 min ogwini lweRockingham, i-45 min drive eningizimu yePerth.
Idume kahle phakathi kwabantu bendawo kanye nezivakashi ngokufanayo, iSwan Salle emagqumeni ineminye yemicimbi yokunqoba ehamba phambili yezwe kanye nemigwaqo emincane esetshenziswayo. Yize leli wayini kungenzeka ukuthi alunakwa kangako yi-buffs eyenziwe ngezikhathi ezithile njengoba ikhiqizwa ezifundeni ezinjengeMargaret River, iSwan Valley inethuba lokuba seduze kwedolobha.
Umhlaba Womuntu. Ipaki lengqikithi likaPerth kuphela elinama-roller coasters, ama-slides amanzi, ama-kar-karts, kanye nokugibela izingane ezincane. Kutholwe eCabra Lake, kuzungeza imizuzu eyi-20 ngemoto usuka e-CBD enendawo yokupaka eningi ngakho-ke kungcono ukuhamba ngemoto. Ipaki livame ukuvulwa kusukela ngoSepthemba kuya kuJuni kodwa hlola iwebhusayithi izikhathi nezikhathi ezivulekile.
I-zoo eSouth Perth inezilwane ezingaphezu kwe-1,000 kanye nezinhlobo ezingaphezu kwe-150, kufaka phakathi nezindlovu zithandwa kakhulu ngabantu bendawo.
Uma umculo wokudansa uyinto yakho, abaculi abaningi abaphezulu nabaculi bomculo we-elekthronikhi bazohamba baye ePerth phakathi kuka-Okthoba noMashi.
Izinketho zokuthenga zikaPerth sezithuthuke kakhulu eminyakeni yamuva nje, ngemikhiqizo emikhulu yokunethezeka yamazwe omhlaba efana neBurberry, iGucci neLouis Vuitton manje enamagatsha ePerth, kanye nezindawo eziningi zokuphumula zaseNtshonalanga Australia. Njengomthetho ojwayelekile, imikhiqizo yokunethezeka itholakala ezungeze umgwaqo onguthelawayeka iKing's Street kanye neHay Street enkabeni yedolobha, kuyilapho izinketho eziphakathi nendawo zihlala zitholakala ezitolo ezinkulu zabahamba ngezinyawo eziseduzane kuphela kukaHay Street nakuMurray Street.
Iqoqo elikhulu kunazo zonke lezitolo zokudlela elisesikhungweni seCity ngenkathi eliseduze neNorthbridge kuyindawo yezitolo ezizimele. Amathrekhi angaphansi kweTrendley anjengeMount Lawley, Leederville ne-Subiaco anezitolo eziningi zemfashini eziklama i-offbeat.
Izindawo ezinkulu zokuthenga ezisezindlini ezingaphandle, ezifana neMorley, Carousel, Cannington, Midland, Joondalup, Booragoon (Garden City), i-Innaloo neKarlrinyup zinomnyango ojwayelekile nezitolo ezitolo.
I-Fremantle Markets inikezela ngesipiliyoni ngokwayo nangaphezu kwezitebele ezizimele ze-150, kodwa ivulwa kuphela ngoLwesihlanu, ngoMgqibelo nangeSonto.
Enye yezingqinamba zikaPerth ukuthi abantu bakhona abaze babambabamba bedla ebusuku. Zimbalwa izindawo ezizonikela ngokudla ngemuva kwe-10PM, ngisho ngoLwesihlanu noma ngoMgqibelo ebusuku. Ngenkathi izindawo zokudlela eziningi ePerth zisebenzele imifino (futhi kuyaqabukela okungama-vegans), ukukhetha kuvame ukunqunyelwa.
Uzothola Ukukhetha okuhle kwezindawo zokudlela zase-Europe nase-Asia.
Kunamagugu amaningi afihliwe of amathofi, izitolo ezincane nabakhiqizi bokudla emaphandleni amahle anokubukwa okumangalisa kwedolobha.
Imboni enkulu yaseWestern Rock Lobster (eyaziwa ngegama layo langaphambi kwembaza). Iningi le-crayfish lithunyelwa e-Asia nase-USA ngemali enkulu. Kodwa-ke, izintengo zamakhrayoni ePerth zingabiza kancane, ikakhulukazi ngesikhathi sasehlobo ngesizini enhle. Ithuba lokuzama ngaphandle kokubhanga ibhange.
Ama-Chilli Mussels ayindlela ekhethekile yasendaweni, equkethe izimbaza eziphekwe utamatisi no-chili, zitholakala ezindaweni zokudlela ezahlukahlukene.
Kutshalwa amaloli ku-Mundaring naseManjimup.
IPerth inenombolo enkulu yamakhofi azimele akhonza ikhofi yekhwalithi ephezulu yezinhlobo ezahlukahlukene kanye nama-brews.
IPerth inemigoqo esakazekele kulo lonke idolobha kodwa imigoqo eminingi isendaweni ye-CBD, Northbridge, Subiaco, Leederville, Victoria Park, Mount Lawley & Fremantle. Amabha avame ukuba matasa ngemuva kwe-5pm nesixuku sasemsebenzini, kodwa iningi labantu bendawo livame ukuya emigoqweni ngoLwesihlanu nangoMgqibelo ebusuku. Imigoqo ye-CBD ikakhulukazi iba matasa kakhulu ngoLwesihlanu kusihlwa ngamabha amaningi athandwayo akha imigqa emide yokungena. Amabha amaningi avulwa kusuka ngase-11AM bese kuvalwa phakathi kwamabili. Kube nokwanda kwamabha amancane nokudla kwe-bistro ezindaweni ezincanyana ze-CBD, kodwa ngokuvamile lokhu kuyabiza kakhulu noma kunekhwalithi enhle, ngakho-ke thenga uzothola inani elihle kusihlwa. Ukubhema kwenqatshelwe ngaphakathi kwawo wonke ama-pubs nemigoqo.
Ubusuku beklabhu kanye nama-gigs omhlaba kanye nawasekhaya abanjelwa ezindaweni ezahlukahlukene enkabeni yedolobha, Northbridge, Subiaco naseLeederville, kanti amanye amakilabhu asakazeke kakhulu.
Izingozi ezinkulu ukuthi isivakashi zaphesheya kobuso bePerth sibhekene nokushiswa yilanga nokuqina komzimba.
Ngaphandle kwalokho, uPerth uphephile.
Ngaphandle kwePerth ungavakashela
UMargaret River - unezinhlobo zewayini ezihamba phambili emhlabeni. Ukudla okuhle namabhishi ama-pristine kwenza isifunda saseNingizimu Ntshonalanga kube indawo oyithandayo. Cishe amahora amathathu ngaseningizimu, okwenza kube indlela efanelekile yokuthola izimpelasonto.
IHyden - empumalanga yePerth iyidolobha eliseduzane kakhulu neWave Rock. Ukwakheka kwamatshe we-granite obukeka njengagagasi elikhulu lokuqhekeka.
I-Cervantes - enyakatho yePerth eWydatbelt, inezinkulungwane zezinsika zamatshe ezilinganiselwe eziphakamisa ophuzi esihlabathini esiNtabeni sasePinnificent. Ichibi eliseduze linama-stromatalites ahlobene kakhulu nalawo atholakala emadwaleni ezinkulungwane zezigidi zeminyaka.
I-Rockingham (Intshonalanga Australia) nePenguinIukunyundela, indawo yemvelo lapho ungabona khona amahlengethwa, amaphinifa namabhubesi olwandle.